DuckDuckGo Inotangisa YeYayo Yega Chishandiso kuBypass Email Trackers | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 28/07/2021 12:00 | IPhone maapplication, Noticias
Kuteedzera nemakambani makuru kwave imwe yembiru dzakakosha dzekuisa mari kuchengetedza kuvanzika kwevashandisi. Apple yakaratidza mwedzi mishoma yapfuura muWWDC yayo basa rayo 'Viga Email Yangu'. Chishandiso chinokwanisa kudzivirira kuteedzera kweakagamuchirwa maemail nekutumira manyepo ruzivo kune vateveri vachishandisa zvisina kujairika maemail akagadzirwa neICloud. Nenzira imwecheteyo, DuckDuckGo yatanga yavo yega yekudzivirira email chishandiso. Nekufungidzira kwekuchengetedza ruzivo uye kuvanzika kwemushandisi, chishandiso ichi chinotanga kushanda muchikamu chayo chebeta.
1 Email yekutevera: yakajairwa muvengi
2 DuckDuckGo inotangisa yayo yega-yekurwisa-yekushandisa tambo yeemail
3 Kuvanzika kwemushandisi mukutarisa
Email yekutevera: yakajairwa muvengi
Icho chokwadi chakatikomberedza ndechekuti isu hapana chatinoita kunze kwekugovana ruzivo tisingazvizive. Sekureva kwezvimwe zvakaburitswa zvidzidzo, zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana emaemail atinovhura uye tinogashira ane matracker. Izvi zvinoreva kuti vanotumira vanogona kuziva patino vhura tsamba, kubva kupi uye nemudziyo upi. Ndiwo mumwezve muenzaniso wekutyorwa kwekuvanzika kwatinoiswa pachena uye zvishoma nezvishoma kuri kuuya kuzobudikira pachena.
DuckDuckGo ndeye webhu bhurawuza iyo inotarisira kuvimbisa kuvanzika kwemushandisi mukutsvaga kwavo ichivharira chero chishandiso chinokanganisa kuvanzika kwevashandisi. Iyo ine Anwendung yeIOS uye Android uye ndeimwe yemabhurawuza ari kukura zvakanyanya. Kunyanya tichifunga kushanduka kwayo nekubatanidzwa mumabhurawuza makuru nekuda kwekuwedzera kwayo.
Apple inopa kushamisika uye inotangisa iCloud + paWWDC 2021
DuckDuckGo inotangisa yayo yega-yekurwisa-yekushandisa tambo yeemail
Yedu yemahara email yekutumira sevhisi inobvisa maemail trackers uye inodzivirira zvakavanzika zveyako email kero pasina kukumbira iwe kuti uchinje eemail kunyorera kana masevhisi.
Kubva kuna yakachengeteka webhu bhurawuza ndafunga kuvhura kudzivirirwa neemail. Ichi chishandiso chitsva chakafanana neICloud + 'Viga Email Yangu'. Nekudaro, ivo vanosiyana mune imwe pfungwa yatinozoongorora pazasi. Zvichida, chishandiso chinokwanisa kudzivirira vateveri kubva kuunganidze ruzivo rwevashandisi pavanovhura maemail, vachisimudzira kuvanzika kwevashandisi.
Iko kushanda kweiyo DuckDuckGo chishandiso inoda kugadzirwa kweemail pasi pechidziro @ duck.com. Ese maemail atinogamuchira mubhokisi redu guru rekupinda achapfuura neDuck's system pasi pechidziro @ duck.com. Padanho iro, iyo system ichabvisa uye kudzima chero tracker yakawanikwa uye ichaendesa tsamba, pasina chero tracker, kune yekutanga email account, semuenzaniso, Gmail kana Outlook.
Kuvanzika kwemushandisi mukutarisa
Musiyano uripo pakati pechirongwa ichi nehurongwa hunoshandiswa naApple ndechekuti iro Big Apple chishandiso haribvise trackers asi asi inotumira zvisirizvo uye zvisina kujairika ruzivo Kutenda kune bounce kuburikidza neemail akagadzirwa email. Nekudaro, iyo DuckDuckGo chishandiso inokwanisa kubvisa trackers uye kutumira mhandara tsamba kune iyo huru yemagetsi account.
Uye zvakare, sezvavano vimbisa kubva ku browser, basa racho rinoenderana nechero mudziyo nekuda kwekubatanidzwa kwekuwedzera mumabhurawuza makuru. Panzvimbo iyoyo, iCloud + 'Viga Email Yangu' inongowanikwa chete paIOS, iPadOS uye macOS. Mumashanduro avo ekupedzisira emabheas ari kuburitswa mumwedzi iyi, hongu.
Iyo DuckDuckGo ficha iri kungoedzwa paboka rakasarudzwa revanoedza beta. Kunyangwe zviine musoro kuti mumavhiki anotevera ichave ichiwanikwa kune wese munhu. Kana iwe uchida kuwana iyo beta unofanirwa kuwana iyo app, enda kuZvirongwa> Beta mashandiro> Kudzivirirwa kwetsamba> Joinha yekumirira rondedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » DuckDuckGo inosuma chayo chishandiso kupfuudza email trackers
Idzi ndidzo nhau dzechina beta yeIOS 15 uye iPadOS 15